SIDA LOO SAMEEYO XAYAWAAN DALKA KU YAALA GACMAHOODA: XEERARKA ASAASIGA AH EE CALAAMADEYNTA IYO UBAXYADA BEERAHA - SOOSAARKA DALAGGA
Beeraley kasta oo doonaya in beerkiisa uu noqdo mid cajiib ah. Iyo in beertii kasta oo cajiib ah waa in ay noqdaan-aadanku. Beautifully iyo tayo ahaan loo qurxiyey jardiinooyinka Rose noqon doonaa highlight iyo qurxinta ugu weyn ee beerta. In this article waxaan ka hadli doonaa sida loo sameeyo beerta Rose ah ee beerta leh gacmahaaga, iyo muujiyaan sawiro dhowr ah.
Meesha ugu fiican
Marka loo eego abuurista xayiraad, is-waafajin muhiim ah. Ka dib markaad go'aansato in aad rabto in aad ubaxdo beertaada, waxaad u baahan tahay inaad heshid booska ugu fiican.
Ilaalinta nalalka iyo dabaysha
Waxaa habboon in la doorto goob laga ilaaliyo dabaysha. Waa inay noqoto qorrax. Waa hagaag, haddii inta lagu guda jiro muddada ugu kulul ee maalinta kuxirsan ay noqon doonto wax yar oo hoos ah.
Waa muhiim! Xalka wanaagsan wuxuu noqon karaa in la dhiso beerta kacsan ee u dhow xayndaabka ama dhismaha qaar ka mid ah - tani waxay ka ilaalin doontaa dabaysha.
Ciidda waa in la miiro, iftiin iyo bacrin ah. Iska ilaali meelaha qoyan iyo kuwa had iyo goorba hadhka ah. Haddii aadan lahayn ciidda ku habboon, ka dibna waxaad horay u diyaarin kartaa - qodo goobta, diiradda qoto dheer oo ah 60 cm, oo codso bacrimin.
Qorshaha iyo qorshaha mustaqbalka beerta kacsan
Siyaabaha lagu naqshadeeyo sariiraha ubaxa quruxda badan ee shubanku waa kuwo weyn. Si guul leh u garaacdo beerta kacay, waxaa muhiim ah in ay ku habboon tahay qaabka guud ee beerta - labadaba midabka iyo midabka, iyo waliba waxyaabo kale oo badan oo door ka ciyaara. Sidaa darteed, tallaabada xigta waa qorsheyn.
Ma taqaanaa? Fisiga ku saleysan dufanka casaanku waxay sare u qaadaan dareenka, iyo dadka badanaa ku neefsada ubaxyadaasi waxay noqdaan kuwo isku dheellitiran oo loola jeedo.
Waxaa muhiim ah in la go'aamiyo inta uu le'eg yahay qiyaasta aad u socoto si ay hoos ugu dhigto beerta gaduudka iyo halka ay ku yaalaan. Kadibna waa inaad fahantaa midabka ubaxa ee aad rabto inaad beerato. Dhaqan ahaan, waxaa jira 2 ikhtiyaari oo lagu diiwaan geliyo. Xayawaankaaga xagaaga xagaaga waxay noqon karaan midabyo jilicsan (beige, casaan) ama midab iyo hodan (jaale, casaan), laakiin waxaa jira noocyo kala duwan oo isku dhafan, sidaas darteed waxaan ku soo lifaaqnaa sawirrada nidaamyada qaar.
Mashruucyada jardiinooyinka kacdoonku waa kuwo kala duwan, waxayna ku xiran yihiin iyaga iyo xulalka midabka la doortay, noocyada ubaxa ayaa la doortaa. Sidoo kale, ha iloobin naqshadeynta derbiyada dhinaca, haddii loo baahdo.
Ka dib oo dhan, qaybta hoose ee warshadda ma had iyo jeer leeyihiin muuqaal ah sheerka. Sida doorasho, halkii dhinacyada, beerta Rose waa la samayn karaa iyadoo la isticmaalayo noocyo hooseeyo sii kordhaya.
Waxaa lagama maarmaan ah in la gaaro xulashada fasalada qaboojinta gaar ahaan si taxadar leh. Qaar ka mid ah beeralayda ubaxa qaarkood waxay sameeyaan khaladaadka doorashada ubaxyada kaliya. Iyada oo xulasho noocan oo kale ah, waxaa jira khatar ah in dhamaadka waxaad heli doontaa gebi ahaanba kala duwan oo aad uuraysatay, iyo qaybta guud waxay noqon doontaa mid aan qarsoodi lahayn.
Waxay si ba'an u daboolaan dhulka, waxay dhali karaan cillado - dhejisku maaha goobta ugu guulaha badan, goobaha dhagaxa. Xitaa noocyo noocan oo kale ah ayaa si quruxsan loo qurxiyo. Noocyada qaar ayaa si xoogan u kobcaya, waxayna u sameeyaan taageerooyin iyaga u koraya.
Xayawaankani ma aha mid aad u daacad ah, koraya, xitaa haddii ay jiraan wax qalad ah oo daryeelka ah. Bloom ilaa dayrta. Noocyo aad u xiiso badan:
Waa muhiim! Noocyada hooseeya ee soo kordhaya waxay u baahan yihiin inay daboolaan xilliga jiilaalka, haddii qaboobuhu uu baraf yar yahay.
Ubaxyada waxaa lagu ururiyaa burushka waxayna leeyihiin muuqaalo dhalaalaya oo qurux badan. Waxay ka kooban yihiin dhererka 45 illaa 70 cm, waxay udhaqaaqayaan dhamaan kuleylaha dhererkoodu, waxayna noqon doonaan boodh aad u fiican oo ah beerta ubaxaaga.
Noocyo waxay u muuqdaan kuwo aad u fiican:
"Libaaxyada ayaa kacday".
Guushani waxay yihiin kuwa ugu caansan, iyo haddii aad doorato beerta ubaxaaga, markaa walaaca ugu muhiimsan ayaa loo geyn doonaa iyaga. Kuwani waa ubaxyo waaweyn, qiyaastii 90 cm oo dheer, oo leh burooyin waaweyn, xoog leh oo xoog leh. Ubax Talladu waa mid caadi ah.
Waxaa lagu beeray karaa qaab ah baadiyaha, iyo haddii la doonayo - diyaarin geed geedka. Tan iyo markii ubaxyada dhaadheer dhif ah ayaa ku yaryar, waxay ka wanaagsan tahay inay ku garaacaan noocyo kala duwan ama dhirta si sawir kama dambays ah loo dhamaystiro.
Noocyo waxay noqon doonaan quruxda dhabta ah ee beerta:
"Barkarool" ama "Wow",
Ma aha oo keliya dhalashada
Weydii sida aad u sameysid xayawaan gacmahaaga ah, waa inaadan iloobin in aysan jiri Karin oo kaliya, sida ku cad sawir hoose. Xulashada dhirta dhererka iyo midabka, waxaad si aad u guuleysan kartaa garaacidda shinnida, ka dhigo halabuurka beerta ubax aad u dhammeystiran, dhammeystiran.
Ingriiska caadiga ah ee suuqyada ayaa kor u kacay jardiinooyinka, marin-biyoodka, xayawaanka, xayawaanka tandem oo leh shuban.
Just fiiri sida xarrago leh iyo xayndaabka xayndaabku ay u egyihiin oo ay ku yaalaan beerta cawska leh ee "lavender".
Ma taqaanaa? Decoction ee duurjoogta (Rose duurjoogta) ayaa ku deeqay caafimaadka, sida midhaha miraha fiitamiin C waa wax ka badan liinta.
Si kastaba ha ahaatee, ku daray geedaha kale si beerta kacay, ha ilaawin in aadanku waa in had iyo jeer waa element ugu weyn ee ka kooban.
Xeerarka guud ee beerashada iyo daryeelka
Waxaad marwalba rabtaa beerta sariirteeda, si taxadar leh ugu koray guriga wadankaaga gacantaada, si aad u qurux badan sida riyada ama sawirka. Iyo si uu sidaas u ahaa, waxaa muhiim ah in la kormeero caafimaadka dhirta iyo si taxaddar leh u daryeel iyaga.
Rose waa had iyo jeer boqoradda beertii, iyo daryeel iyada oo ku habboon. Laakiin dhibaatooyinka ma aha mid aad u adag marka ay jirto rabitaan ah inaad beertaada gaarka ah u sameyso.
Dhirta caafimaad leh waa in ka badan kala badh dammaanadda caafimaadka ee mustaqbalka Rose rose. Iyada oo aad dooranaysid geedo sax ah, si weyn ayaad u yareyn kartaa shaqaynta daryeellidda dhirta, sababtoo ah waxay u adkeysan doonaan cudurrada iyo quruxda, taas oo macnaheedu yahay in daryeelkooda la dhimi doono ugu yaraan.
Ka taxaddar inaad hore u soo iibsato ka hor - ka hor bilawga xilliga beerto. Uu ku fiican yahay meelo gaar ah.
Fasaxyada waxaa lagu iibiyaa 3 nooc: iyadoo leh nidaam xidid furan, oo leh nidaam xidideysan (oo ah dheryihii ama weelka) iyo xididdada la buuxiyey.
Waa muhiim! Doorashada ugu fiican waa nidaam xidhan oo xidhan. Xididdada geedo sidan ah ayaa ku sii jiri doona xaalad qumman, daryeelkooda waa mid sahlan, si kastaba ha ahaatee, qiimaha badeecadu waxay noqon doontaa mid aad u sareysa.
Markaad dooranayso, waxaad u baahan tahay taxadar dheeraad ah: si taxadar leh u baaro caleemaha jiritaanka cudurka. Caleemaha waa in ay sidoo kale noqon caafimaad leh, iyo nidaamka xididka waa in uu ahaado mid xoog leh, qoorta ku saabsan 1 cm dhexroor. Haddii ay suurtogal tahay, hubso in xididadu ay cad yihiin oo ay cufan yihiin.
Waxaa jira 2 siyaabood oo lagu beeri karo geedo - guga ama dayrta. Guga, waxaad bilaabi kartaa oo kaliya marka dhulka ay horay diiran tahay. Tan waxay badanaa dhacdaa bilowga Maajo.
Dayrta, beerto waxay socotaa bartamihii Sibtambar ilaa bartamihii October. Waxaa muhiim ah in aan la beero xitaa soonka ama goor dambe. Iyadoo beeritaanka hore, waxay sii deyn karaan caleemaha dhalinyarada ah oo aan si fudud u helin wakhti ay ku sii xoogaystaan ​​oo ay barafoobaan bilawga hawada qabow. Beerto goor dambe waa khatar sababtoo ah dhirtu ma laha waqti ay ku qaadato xididka.
Waa muhiim! Beerto xilliga dayrta waxaa lagula talinayaa inta badan noocyada qaboobaha!
Daloolka loo yaqaan 'seedling' waa inuu ahaadaa cabbirka sida nidaamku uu yahay mid bilaash ah. Inta badan fossa 50 cm oo ballaaran oo qoto dheer.
Haddii aad ku dhasho-aadanku leh nidaam xidideysan, ka dibna waa inaadan nadiifin xididada dhulka. Haddii nidaamka xididka uu furan yahay, markaa waxaad u baahan tahay inaad jarjaratid xididada oo ka tagto biyo dhawr saacadood.
Ka hor intaan la beeri, buuxi daloolka biyaha oo sug ilaa inta la nuugayo. Waxa kale oo aad u baahan tahay inaad diyaariso isku dar ah ee dhulka iyo compost - waxay buuxin doontaa daloolka leh. Nidaamka asaasiga ah ee qaboobaha waa inaysan taabanin isku dar ah nafaqada, sidaas darteed ka hor inta aadan hurudda, waxaad u baahan tahay inaad ku rushaysaa xididada dhulka leh caadiga ah. Ka dibna waxaan samaynaa geel si ay dhirtu u qoto dheereyso 5 cm oo dheeraad ah dhulka. Loosen ciidda noqon kartaa wax ka badan 15 cm.
Waa muhiim! Haddii ay jiraan wax wax ku ool ah ee sii kordhaya ee seedling, waa in laga saaro.
Labo todobaad kadib, dhirta ayaa xididada ka qaadi doonta, iyo buurta, oo la sameeyay xilligii beerto, waxay u baahan doontaa in laga saaro.
Aad u muhiim u ah qaboobaha waa waraabinta saxda ah. Waxaa lagama maarmaan ah in lagu waraabiyo ubax aan ka badneyn hal mar toddobaadkii iyadoo xisaabinta 1 baaldi biyo ah 1 bush. Ha u waraabin dhirta si aad u sarreeya, hubi in waraabinta ay qoto dheer tahay. Tani waxay ka hortagi doontaa sameynta xididada dusha sare ee aad u dhib yar.
Sidoo kale isku day in aadan buuxin Rose, si aanay u joojin warshadda of oxygen. Raadi dhulka dhexe ee waraabinta.
Waa muhiim! Haddii ay dhacdo in aadan awoodin inaad waraabiso dhirta muddo dheer - saldhigeeda salkiisa cawska ama compost cusub si aad u dabaabtaan qoyaan.
Ha iloobin bacriminta iyo marka qaboobaha la siiyo biyo waraabin joogto ah. Si kastaba ha ahaatee, ha ka badin, sababtoo ah haddii ubaxu ka badanyahay, way ku fiiqi karaan aad u liita, laakiin cagaarka ayaa sii deyn doona wax badan.
Sidoo kale, xayawaanka ayaa aad u jecel bacriminta qaabka digada faras. Qashinka ama qashinka doofaarka waa in aan loo isticmaalin, maadaama ay aad u adagtahay oo kaliya gubi dhammaan xayawaanka.
Waxaad samayn kartaa iyo Bacriminta macdanta. Gaar ahaan wanaagsan haddii ay kala diri. Si aad u sameysid dhar noocaas ah ka dib waraabinta waa faa'iido leh. Bacriminta waa in la joojiyaa dhammaadka July, sababtoo ah waqtigaan xayawaanku waxay bilaabayaan inay diyaariyaan cimilada qabow.
Xayawaanka waxay u baahan tahay daryeel iyo cimilada aan fiicnayn. Geedaha ayaa laga yaabaa inay ka walwalaan kuleylka dheer ama qabow, laga bilaabo roobab daba dheeraaday. Si aad u ilaaliso beerta Rose, waxaad samayn kartaa ubaxa "Zircon" ama "Epoxy". Iyo xilliga gu'ga, marka qorraxdu bilaabanto diirimaad, waxay ka fiican tahay in la xafido shubanka shaashadda si ay u siiso fursad ay kula qabsadaan kana fogaadaan gubashada.
Ha iloobin manjooyin joogto ah ee shubanku, ka saarista caleemaha bukaanka iyo caleemaha, ka dibna qaboobahaaga ayaa kuugu mahadcelin doona muuqaalkooda caafimaad iyo xoog leh.
Waa muhiim! Waxaa lagama maarmaan ah in la gooyo qulqulatada saameeya si ay u qabato qiyaastii 3 cm ka badan aag caafimaad leh.
Horumarinta beertaada asalka ah ee aad u fiican iyo beerta koritaanka waa shaqo fudud. Si kastaba ha noqotee, oo leh rabitaan weyn, oo raacaya shuruucda qaarkood, adoo raacaya talooyin muhiim ah, waxaad gaari kartaa natiijooyin cajiib ah. Shaqadaadu waxay ka bixin doontaa aragti farxad leh sariiro ubax ah, oo ay ku fiicantahay in la qaato maalmaha xagaaga iyo fiidkii. Nasiib wacan